The Voice Of Somaliland: Yaa yidhi odaygu ma abaalgudee wa aarsadaa?
Yaa yidhi odaygu ma abaalgudee wa aarsadaa?
Siyaasadihii Qanyare ee kobcay, awoodiisii balaaratay, magaciisii dheeraaday wuxuu sababay in uu hogaamiye u noqdo koox aan sidaas u tiro badneyn laakiin saameyn weyn ku lahaa shirkii Mbagati taas ayaa keentay in C/lahi Yusuf uu dadaal dheer u galo soo jiidashada kalsoonida Qanyare intii lagu jiray loolankii hogaanka cusub ee shirku dooran doono. Maantii uu Qanyare ku dhacay dabinkii uu u loogay Mr Yusuf ayaa u danbeysay horumarkii siyaasadeed ee Qanyare. Isagoo Qanyare oofinaya balanqaadyo muhiim ah isaga oo ka heysta Yusuf ayuu saameyn weyn ku yeeshay guushii Cabdullahi Yusuf ka helay Mbagati maadaama Qanyare ku qanciyey in xulufadiisa oo dhan ay codkooda siiyaan. Waxaa ku soo baxday oraahdii aheyd “God sireed ha qodin hadaad qodana ha dheereyn” Dibirtii uu weydaartay Qanyare raggii loollanka ku jiray ee beel wadaag iyo asxaabtaba ay ahaayeen sida C/qasim ayaa isagii ku xumaatay goor danbe.
Wuxuu qorsheeyey C/lahi in hubka laga dhigo Qanyare wixii gacantiisa ku jira hadaba habkee ayaa loo marayaa hub wareejinta. Xusuuso labadii arimood: 1. Jen Naaji waa Yemeni aan mudneyn hogaanka ciidanka xoogga Soomaaliyeed; maalintii Dayniile hubka looga tiriyey Qanyare wuxuu C/lahi soo diray Jen Naaji 2. Maleeshiyada P/land ciidan dowlad ma ahan nagamana qaadi karaan hubka; C/lahi Naaji wuxuu ku soo daray maleeshiyo dhafoor qiiq ah oo ka yimid Garowe iyo Jariiban iyagaana hubkii ka jiitay odaygii Qanyare. Taas waxaa u sii raacay in wiilal yaryar oo naftiisa ilaalo ka ahaa Qanyare lagu laayey madaxtooyada isagoo booqanaya C/lahi Yusuf. Waxaa rag goob joog ahaa sheegeen in meydka wiilasha dhegta loogu sheegay C/lahi isagoo la fadhiya Qanyare iyo asxaabtiisa hayeeshee kuma soo qaadin geeridooda ilaa shirkii ka dhamaado oo markii uu Qanyare sii baxayey ayuu si kaftan ah u yiri “Intii dhimatay alle haw naxariisto ee meydkaagana hore u sii qaado” Waxaa taas ka sii dartay markii Qanyare xusi waayey tacsi iyo cabasho midna xasuuqii loo geystay wiilasha aan waxba galabsan. Nin la shaqeynayey muddo dheer C/laahi Yusuf ayaa odhaahdan tiraabay: “Odaygu ma abaal gudee waa aarsadaa” Bal aan dhowrno waxa ay mutaan ragga kale ee haatan sii daba jooga C/lahi Yusuf.